China Click spc flooring PVC raive nebutiro nokupiringidza uriri mapuranga fekitari uye vagadziri | Kenuo
Eco Friendly 6mm / 7mm / 8mm nhamo ...
Various siyana isapinda Ho ...
Factory Unilin Click Waterp ...
Yepamusoro mhinduro slip resistan ...
Dzvanya spc flooring pvc vinyl inopindirana pasi mapuranga
KENUO kana OEM
flooring vinyl mapuranga
3.2mm 4.0mm 6.0mm kana yakagadzirirwa
182mm * 1220mm kana tsika
Yemukati yekushongedza pasi
Eco-inoshamwaridzika, Isina mvura, Pfeka nemishonga
Isu tiri mugadziri kubva Shijiazhuang wedunhu reHebei padhuze neBeijing .Uye yedu yendege yazvino ndeye Shijiazhuang Airport, gamuchirai kutishanyira
SPC ndiyo inogamuchirwa zvakanyanya muvinyl flooring inonzi: Stoni Polyester Yakaumbwa
Tinosarudza zvinhu zve 100% mhandara resin. Hapana glue , inoita kuti pasi igare yakagwinya.
Flooring ukobvu Anogona Customized sezvo wako Market Kudiwa.
SPC flooring tinya kukiya vinyl flooring
620 * 313mm kana gadzirisa semutengi anoda.
3.2mm 4.0mm 5.0mm 5.5mm 6.0 mm kana gadzirisa
Wood-Zviyo, Dombo, Kapeti nezvimwe
Valinge 2G / Uni Dzvanya / Uni Push
Isina mvura, Anti -slip, Wear-kuramba, Moto-kuramba, Inzwi rekudzivirira
Nyore tinya kuisa / Yevashandi inodhura kuchengetedza / Super kugadzikana / Eco ine hushamwari
Kushanda makore gumi
Hupenyu Hwose Hwakagadziriswa Structural Warranty
SPC VINYL PLANK FUROZI YOKUSANGIRA:
Iwe unoda kutaridzika kweyakaomeswa huni pasi, asi iwe haudi mutengo. Kana iwe uchida kutaridzika usingashandise iyo mari yese, vinyl plank pasi yakanakira iwe.
Aya mapuranga ane echisikigo dhizaini dhizaini inoita senge chaiyo huni, asi iwo anodhura zvakanyanya kushomeka uye zviri nyore kuisa. Uyezve, vinyl ine zvimwe zvakanaka zvausingakwanise kuwana nehuni. Nemabhenefiti mazhinji, yedu vinyl plank flooring yanga ichiendesa kune vese kutenderera pasirese.
Yakare Style Maficha Ekumusoro :
Mbeu yehuni yakati sandara
Anti-slip athari zvakadaro .
Nyowani Style Flooring:
Ruoko kukwenya pamusoro
Zvirinani anti-slip athari,
Iko kurongeka kuri kwechokwadi
Kupfeka-kusagadzikana matete kwakanyanya uye kwakawanda kupfeka kusagadzikana.
PANE ZVAKAWANDA ZVAKASIYANA ZVAKAFANANA
NEI UCHISARUDZA SPC KUSVIRA SECHAKO CHAKANAKA Sarudzo?
Ngatione zvinotevera pamwe chete:
Vinyl Plank Floor Makomborero:
Kuisirwa kuri nyore kunoreva kumisikidza kuisirwa, asi handizvo zvese: Mari yemapuranga evinyl inodhurawo kupfuura mamwe marudzi epasi. Uyu ndiwo mukana wako wekuwana-wepamusoro-unotaridzika pasi pamutengo iwe waunokwanisa kuwana.
Iwe unoda pasi iyo yakasununguka kufamba pamusoro, uye vinyl mapuranga kununura. Ingoisa kuputira pasi pemapuranga ayo anozovhara ruzha uye nekuita nhanho yega yega yaunotora seyakagadzikana seyekupedzisira. Iwe unonzwa kunge uri kuyangarara pamhepo kana uchifamba pane vinyl.
SPC raive nebutiro flooring inowanikwa mune chero ruvara uye pateni iwe yaunogona kufunga nezvayo.
Unogona kusarudza mavara akasimba, kana akasiyana mapatani.
Idzi SPC pasi neakarongeka echitarisiko chaicho,yakakurumbira pateni ndeyehuni huni pasi, tsanga yematombo, ganda zviyo, jira rinotarisa uye chero mamwe mafashoni dhizaini mapatani anogona kugadzirwa, OEM% ODM bvuma!
With nyanzvi design & zvibereko chikwata OEM & ODM ndiye kubvuma, DZVANYA PANO kuwana ruzivo.
SPC Click Flooring anoshandiswa nevakawanda kuti mhando uriri pamusoro:
Hot Tengesa Zvigadzirwa
Zvadaro: China Fekitori Mutengo 5mm gobvu PVC Mapuriro 0.5mm Pfeka Rukoko Vinyl Floor Plank
Unilin tinya Eco ushamwari WPC flooring / PVC woo ...
4mm 5mm 6mm umbozha huni UV unhani PVC wpc spc ...
High yepamusoro mukuru simba fireproof laminate add ...
Yakakwira Simba rakasimba rakasimba rakapindirana UV ...
Unilin tinya pvc yemapuranga emapuranga emukati
UV unhani pamusoro kurapwa uye indoor kushandiswa hos ...